ny fianakavian'i DJ Arafat dia niharan'ny fitomaniana vaovao - TELES RELAY
Rehefa miomana hankalaza ny taona vitsy taorian'ny nahafatesan'i Yôrôbo, ny fianakaviana Houon dia tratry ny fahafatesana vaovao. Ny zanakavavin'ny Tv3 dj, zokin'i DJ Arafat dia maty tamin'ny sabotsy teo taorian'ny aretina fohye.
Any Chad amin'izao fotoana izao dia tsy mahay miteny ny any ivelany ny rainy ary tsy miverina noho ny sisintany mihidy. Raha ny filazan'ny mpiara-miasa aminay ao amin'ny infodrome dia tsy nisy famantarana ny tazo sy ny aretina taorian'ny alina.
Nentina tany amin'ny hopitaly izy rehefa maty io maraina io. Fahatairana iray hafa ho an'ny tv3 Dj izay mazava ho azy fa tsy nandevona ny fahafatesan'ny zandriny indrindra.
Efa ho herintaona mahery taorian'ny nahaterahany, hoy ny farany, Houon Ange Didier "Arafat" mbola tsy nimonomonona ny fianakaviany. Ny eritreretintsika rehetra dia tarihin'ny fianakaviana amin'ny ankapobeny ary mankany amin'ny Dj Tv3. Fampiononana rehetra.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://afriqueshowbiz.com/cote-divoire-la-famille-de-dj-arafat-frappee-par-un-nouveau-deuil/